भक्तपुर । हनुमन्ते खोला पसेर बितण्डा मच्चाएको बस्तीका बासिन्दाको रात अनिदोमै बितेको छ । भक्तपुर नगरपालिकाको जगाती, हनुमानघाट, बाराही क्षेत्र, सिर्जनानगर, सल्लाघारी, लिवाली क्षेत्रका बासिन्दा मात्र हैन...
बाजुरा । बाँया मृर्गोला फेल भएपछि त्रिबेणी नगरपालिका ३ पुर्वूताका ४१ बर्षीय गोरख शाहीले उपचारका लागि सहयोगको याचना गरेका छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका गोरखले जीवनरक्षाका लागि आर्थिक सहयोगको आग्रह गरे...
काठमाडौं । कान्तिपुर दैनिकका उथल पुथल भएको छ । कान्तिपुर छाडेको १० बर्षपछि नारायण वाग्ले फेरि कान्तिपुरका प्रधानसम्पादकका रुपमा फर्किएका छन् । उनको आगमनलाई १० बर्षपछि खोलो फर्किएको टिप्पणी भइरहेको छ ।...
एलीना कार्की। काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका युवाहरुको राष्ट्रिय भेला २०७५ बुधबार काठमाडौँको भृकुटीमण्डपस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा सम्पन्न भएको छ ।कार्यक्रममा विदेशबाट केही सीप सँगै अर्थाैपार्ज...
काठमाडौं । मितव्ययिताको नीतिका कारण कर्मचारी देखि उच्चपदस्थ अधिकारीको खाइपाई आएका सुविधा कटौती भएको छ । हरेक साउन लागेपछि दुर्गमसहित केही निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि व्यवस्था गरेको भत्ता आउने साउन...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय दिपायलले भष्ट्राचार गरेको आरोपमा वडिमालिका बहुमुखी क्याम्पस नौविस बाजुराका क्याम्पस प्रमुखसहितको नाममा सर्वोच्चमा मुद्धा दर्ता गरेको छ । विशेष अदालत...
‘जोसुकैको घरधनी भए पनि काम नगर्ने ठेकेदारलाइ कारवाही नगरी नछाड्छु । काम नगर्ने ठकेदार तत्काल पक्राउ पर्छन । जेठ २४ गते गते गृह मन्त्री रामबहादुर थापाले एउटा कार्यक्रममा भने । ‘ढुक्क भएर काम गरे हुन्छ ...
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा विभिन्न गुट उपगुट भएपनि मुख्य रुपमा दुई गुट नै छन् । एउटा गुटको नेतृत्व स्वयं सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् भने अर्को गुटको नेतृत्व वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेक...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ‘कार्यकर्ता संरक्षण कोष’ बनाउने भएको छ । नेपालपाटी डटकमलाई प्राप्त विधानको मस्यौदा अनुसार धारा –६७ (क) मा ‘पार्टी कार्यकर्ता संरक्षणको लागि एउटा कोष हुने’ ...
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकाल गोलाप्रथामा निर्भर हुने भएको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य खतिवडा र थापाले आगामी असार ४ गते गोला तान्नेछन् । गोलाप्रथाबाट सदस...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नेपाली कांग्रेस ढुलमुले, सम्झौतापरस्त र आत्मसमर्पणवादी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, कांग्रेसले लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वप...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन कम्तिमा १० वर्ष संगठित सदस्य भइ काम गरेको हुनुपर्ने विधान तयार भएको छ । महिला, दलित, सिमान्तकृत जनजाति र अपाङ्गता भएका व...
काठमाडौं । कालिकोटका भूपेन्द्र मल्ल विदेश जानु अगाडी एउटा सानो सपना थियो । सानो घर बनाउने, छोरालाई राम्रो स्कुलमा पठाउने र परिवारलाई कम्तिमा दुई छाक खान समस्या नहुने गरि खुसी बनाउने । त्यही सपनाले उनल...
काठमाडौं । ‘अदालतमा विदेशी सहयोग स्वीकार्य हुँदैन म त्यसलाई बन्द गर्छु’ कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पद सम्हालेको केही दिनमा भनेका थिए । तर सर्वोच्च अदालतमा अहिले पनि विदेशी दातृ सस्थाको सहयोग रोकिए...
एक हजारभन्दा बढी कामचोर ठेकेदारको सूची तयार, डिभिजन कार्यालयका अधिकारीलाई पनि कारवाही
काठमाडौं । सरकारले काम नगर्ने ठेकेदार हरुको सूची तयार गरेको छ । काम गर्दै नगर्ने, समयमा काम नसक्ने र काममा गुणस्तर सामग्री प्रयोग नगर्ने गरि तीन तहका ठकेदाको सूची तयार गरेको छ । गृहमन्त्रालय स्रोतका...
आजबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले नाम फेर्ने
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नाम फेर्ने भएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा ‘अन्डरलाइन’ राखेर निर्वाचन आयोगमा नाम दर्ता गराएको पार्टीले नयाँ नामसहित दर्ताका लागि आयोगमा बिहीबार निवेदन दिने तया...
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाद्वारा संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत (बजेटका मुख्य बुँदा)
काठमाडौँ । सरकारले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवाराज खतिवडाले संघीय संसद्का दुवै सदन (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा) को संयुक्त बैठकमा ब...
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र संघीय समाजवादी फोरमबीच दुई बुँदे सहमति भएपछि फोरम र राजपाको गठबन्धन टुटेको छ । फोरम केन्द्रीय सरकारमा सहभागी हुनेछ भने प्रदेश २ को सरकारबाट समेत राजपा बाहि...
कानुनमा सार्वजनिक पद धारण गर्ने पात्रहरूले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्छ । तर वर्तमान मन्त्रीहरुले सरकार गठन भएको झण्डै सय दिनमा सम्पत्ति बिबरण सार्वजनिक गरे । सायद पहिलो पटक मन्त्रिपरिषदमा ...
काठमाडौँ । कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाउने कि सरकारले कम्युनिष्ट पार्टी चलाउने ? यो विषय झट्ट हेर्दा सामान्य लाग्न सक्छ । तर यसको गहिराई खोज्ने हो भने त्यति नै गहन छ । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार...